Nezvedu - Nanchang B-land Shoes Kugadzira Co, Ltd.
Yedu Kambani, Nanchang B-NYIKA Trading CO., LTD, iri muguta reNanchang, mudunhu reJiangxi, China. Yedu fekitori inechifukidza inovhara nzvimbo ye28,000sqn, zvakaenzanisirwa mashopu e30,000sqm, uye inogona kubata mazana maviri evamwe vanhu kuti vashande, inova hombe yekugadzira mabhizinesi muJiangxi.
Isu takadzidza uye takavandudza pane shangu nzvimbo yaive neanopfuura makore makumi maviri. Yedu kambani inobata manejimendi zano rekuti "Hunhu Hucharatidza Simba, Ruzivo Kusvika Kubudiriro", uye inoedza napose patinogona napo kuti tiite zvakanaka pane chero chinhu kubva padanho rega rega, yega poindi yekuita yekugadzira kusvika kwekupedzisira kuongorora, kurongedza uye kutumira.
Isu tinoomerera pane chirevo chekusimudzira cheYakakwira mhando, Kubudirira Kutendeseka uye Kuderera-pasi kushanda nzira yekukupa iwe yakanakisa sevhisi yekugadzirisa! Tinokugamuchira nemoyo wese kuti ushanyire kambani yedu kana kuti tibate isu kuti tishande pamwe!
Kambani yedu ine chigadzirwa dhizaini uye timu yekusimudzira, inogona maererano nezvinodiwa nevatengi uye zvinoitika munyika, inogara ichiburitsa dhizaini nyowani nekusimudzira kusangana nezvinodiwa mumusika.
Makuriro ebhizinesi: Shangu: shangu \_ moccasin \_ inotsvedza yemukati uye zvigadzirwa zvematsamba.
Mane vatengi: Bass Pro. \_ C & J Clarks \_ Landsend \_ Talbots \_ Wal-Mart \_ Blair.
Isu tinogara tiri munzira yedu, tichifambidzana naiye CEO Simon Wu, tichikura uye tichikura chaizvo.
Isu pano nokutendeseka kukugamuchira iwe kuti ushanyire fekitori yedu uye umise hushamwari hwakareba hwakareba nesu. Tichashanda nehunhu hwedu hwakanaka uye nehunyanzvi pane shangu.
ln 1982 kubva kuna sekuru vake apo aive mudzidzi wepakati chikoro uye mumakore maviri anotevera akaziva tekinoroji uye hunyanzvi hwekugadzira shangu mbiri dzakanaka. Nehurombo sekuru vake vakashaya muna1984 uye gore rimwe chetero, akaenda kuyunivhesiti mushure mekubudirira kupinda pabvunzo uye akazova shasha muJiangxi University (akafanotungamira weNanchang University).
ln 1988 akawana gratuatu uye akapihwa kune imwe nyika kambani yekutengesa inotengesa porcelains.
Mu1992 akaendeswa kune imwe kambani nyowani kwaakatanga kuita bhizinesi reshangu izvo zvaingova zvake zvekutanga.Akazove anozivikanwa nekukurumidza mukambani uye akakwidziridzwa kuve maneja wedare reshangu mu1994. Mukati memakore akawana mibairo mizhinji nekuda kwake kunoshamisa kuita.
ln 1998 akasiya basa rake ndokumisikidza yake kambani achitarisa kune chete bhutsu kutengesa uye kugadzira.
Tinokugamuchira nemoyo wese kuti ushanyire kambani yedu kana kuti tibate isu kuti tishande pamwe!
- Nanchang B-Nyika Kutengesa Co, Ltd.